သောသီခို: ကချင်ကို အပြတ်ချေမှုန်းရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ် လွှတ်တော်တွင် ပြော
ondragstart="return false" onselectstart="return false"
ပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြည့်ကောင်းလာနေပြီ။ အခုမှဗမာအစိုးရအတွင်းမှာ မဟာဗမာဝါဒီတွေရုပ်လုံးပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပေါ်လာတယ်။
"ဦးလှဆွေ၏ ပြောဆိုမှုသည် စစ်တပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၏ အာဘော်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရင်ထဲမှ ဆန္ဒအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်"
လွတ်တော်ထဲမှာ ချင်းပါတီဥက္ကဌ ဦးဇိုဇမ်တောင်ဒီလိုပြောဆိုနေချိန်မှာ ကျနော်တို့ လူကြီးတချို့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကောင်းကြောင်း တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ်သဘောထားမှန်ကြောင့် စသဖြင့်တွေ့ သမျှအင်တာဗျူးတွေကို ဖြေကြားနေတာ ကိုပြန်ကြားယောင်မိတော့ ဘ၀တူ တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာ ရှက်မိနေတာကြာပြီ။ ရှေ့ နေ ဦးအောင်ထူးရေးတဲ့ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ခေါင်းစဉ်လို ရှက်တတ်မယ်ဆိုရင် လှဲသေဖို့ ကောင်းတယ် လို့တော့မပြောချင်သေးပါ။ အခုကိစ္စကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ယနေ့ နိုင်ငံတော်အာဏာကို ကိုင်ထားတာ စစ်တပ်နဲ့ ကြံ့ဖွတ်ပါတီ။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကြံ့ဖွတ်ပါတီဥက္ကဌကလာတာ.. ဒီထဲမရှင်းတာ ဘာရှိသေးလည်းဗျာ....
ခင်ဦးသာ - ဧရာဝတီ
၂၀၁၂ ခုနှစ် သြဂုတ်လအတွင်းက ကျင်းပသော ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ၏ ပထမအကြိမ် ပြည်လုံးကျွတ်ညီလာခံသို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် လာရောက်နှုတ်ဆက်စဉ် (ဓာတ်ပုံ – ကောင်းညီဟန် /ဧရာဝတီ)
ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) အား အပြုတ်တိုက် ချေမှုန်းနိုင်မှသာ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အာဏာရ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ) မှ လွှတ်တော်အမတ် ဦးလှဆွေက ယမန်နေ့က ကျင်းပသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေး၌ ပြောဆို ဆွေးနွေးကြောင်း သိရသည်။
ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ၏ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဆွေက “ကမ္ဘာပေါ်မှာ စစ်ပွဲတွေ ကြည့်လိုက်၊ ညှိမရလို့ တိုက်နေတာချည်းပဲ။ လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ မာလီမှာ ပြင်သစ်တွေ ၀င်တိုက်နေတာ ညှိမရလို့ပဲ။ ကိုလံဘီယာဆိုလည်း အဲဒီလိုပဲ” ဟု ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ (DVB) နှင့် အင်တာဗျူးတွင်လည်း ဖြေဆိုထားသည်။
အမေရိကန်နှင့် ဂျပန်တို့အကြား ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်သည်လည်း ညှိမရသည့်အတွက် ဗုံးကြဲလိုက်မှသာ ကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးသွားကြောင်း ဒု ဗိုလ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးလှဆွေက ဥပမာပေး၍ ပြောဆိုသည်။
“ဗုံးနှစ်လုံး ကြဲထည့်လိုက်တော့မှ ဟိုကောင်တွေက ချက်ချင်းလာပြီးတော့ စစ်သင်္ဘောကြီးပေါ်မှာ လာပြီး ငြိမ်းချမ်းရေး လက်မှတ်ထိုးသွားတယ်၊ လက်နက်ချပါပြီ ဆိုပြီးတော့။ ဒီတော့ ကျနော်ပြောလိုတာက ရွှေလက်နဲ့ ခေါ်နေတုန်း မလာတဲ့ KIA ကိုလည်းပဲ Bullet ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလားပေါ့” ဟု ဆိုသည်။
ဦးလှဆွေ၏ ပြောဆိုမှုသည် စစ်တပ်၊ အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့ ကိုယ်စားပြုထားသည့် နိုင်ငံရေးပါတီ၏ အာဘော်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ရင်ထဲမှ ဆန္ဒအမှန်ကို ဖော်ထုတ်ပြသလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ချင်းအမျိုးသားပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇိုဇမ်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး မလုပ်ချင်လို့ တသက်လုံး ဟန်ဆောင် လိမ်လည်လာတာတွေကို ဖော်ပြလိုက်တာပဲ။ ဒီလို ပြောစကားကြောင့် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်လာတာကိုလည်းပဲ သူတို့က တာဝန်ယူရပါလိမ့်မယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ၌ တမီလ်သူပုန်များအား အစိုးရက အပြုတ်တိုက်ပုံနှင့် အမေရိကန်နှင့် ဂျပန် စစ်ပွဲသည်လည်း ဂျပန်ကို ဗုံးကြဲလိုက်၍ ငြိမ်းချမ်းရေးရကာ လက်ရှိတွင် ဂျပန်နိုင်ငံ တိုးတက်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ KIA ကို အပြုတ် တိုက်နေခြင်းသည်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဖြစ်ကြောင်း စသည့်ဖြင့် ဦးလှဆွေက ဆွေးနွေးသည်ဟု လွှတ်တော်အမတ်များက ပြောသည်။
“KIA ကို အပြတ်ချေမှုန်းနိုင်မှ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ်။ ဥပမာ – ဂျပန်ကို အမေရိကန်က ဗုံးကြဲပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေး ရတယ်။ သီရိလင်္ကာမှာ တမီလ် သူပုန်တွေကိုလည်း သမ္မတက အပြတ်ချေမှုန်းပြီးမှ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရတယ်ဆိုပြီး KIA ချေမှုန်းရေးကိစ္စကိုပဲ စောင်းပေးဆွေးနွေးတယ်” ဟု အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖုန်းမြင့်အောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခက်ထိန်နန်၏ “ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှုရှိမည့် ခိုင်မာသော အခြေခံမူများ ချမှတ်ပေးရေး” အတွက် ပြည်ထောင်စု အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးလှဆွေက KIA ကို အပြတ်ချေမှုန်းရေးကိစ္စ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ စုစုပေါင်း ၂၉ ဦး ဆွေးနွေးရန်ရှိပြီး ယမန်နေ့က ၁၄ ဦး ဆွေးနွေးကာ ကျန်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များက ယနေ့ ဆွေးနွေးမည်ဟု သိရှိရသည်။
ကချင်စစ်ပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ယမန်နေ့က ၁၄ ဦး ပါဝင်ဆွေးနွေးကြရာတွင် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ် ၉ ဦး၏ ဆွေးနွေးမှုသည် KIA အား အပြတ်ချေမှုန်းရေးကိုသာ ဦးတည်ဆွေးနွေးကြကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များကမူ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်ပြီး ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရေး ကိစ္စကို စောင်းပေး ဆွေးနွေးကြကြောင်း ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
၎င်းက “နယ်မြေတခုကို ခဏ အပိုင်သိမ်းနိုင်ရုံနဲ့ ထာဝရ ငြိမ်ချမ်းရေး မရနိုင်ဘူး။ ဒီတော့ အပြတ်ချေမှုန်းရေး ပြောမယ့်အစား တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာခြင်းကသာ ငြိမ်းချမ်းရေးရမယ့် ကိစ္စတွေ အဖြေရှာရမယ်။ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးနိုင်မှသာ ပြည်တွင်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာပါ” ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်းစစ်သည် ၆၆ နှစ်ရှိဖြစ်၍ ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စကိုသာ အဓိက ဦးစားပေး ဆွေးနွေးသင့်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံး တန်းတူရေးအတွက် စစ်မှန်သည့် ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်နိုင်ရေးသည်လည်း ပြည်တွင်း ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် အရေးပါကြောင်း ဒေါက်တာအေးမောင်က ဆိုသည်။
ကချင်အရေးနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ဒု ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ကျော်ထူးက ဆွေးနွေးရာတွင် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးကို ပထမဆွေးနွေး သဘောတူညီမှု ရရှိပြီးမှသာ ကြာရှည်သည့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှု (Political Dialogue) ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟု ပြောဆိုဆွေးနွေးကြောင်း ယနေ့ထုတ်အစိုးရ သတင်းစာများ၌ ရေးသားထားသည်။
KIA /KIO အဖွဲ့ကမူ အပစ်အခတ် ရပ်စဲမှုကို အစိုးရနှင့် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက် ဖြစ်ပွားနေရကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးမှုကိုသာ ပထမ လုပ်ဆောင်လိုတော့ကြောင်း ပြောဆိုနေ၍ အစိုးရ စစ်တပ်နှင့် KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေ ရခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ရလိုပါက နိုင်ငံရေးအရ မဖြစ်မနေ ဆွေးနွေးရန်နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များအကြား ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန် တတိယ အင်အားစု ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်များထားရေး၊ လွှတ်တော်ပြင်ပ၌ နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်၍ အဖြေရှာပြီးပါက “ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲမထွက်ရေး အာမခံချက် ပေးရေး” ကိစ္စများကို အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ရှမ်း ပြည်နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၂) မှ ဦးစိုင်းကျော်ဇောသန်း ကလည်း ဆွေးနွေးသည်။
တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များက ဆွေးနွေးရာတွင် ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ စစ်တပ်သည် သီးသန့် ဖြစ်နေပြီး အာဏာ ပိုမိုရှိနေသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်၍ နိုင်ငံတကာ၏ ဒီမိုကရေစီ စံနှုန်းနှင့် မကိုက်ညီကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ကချင်အား ထိုးစစ်မဆင်ရန် သမ္မတက အမိန့်ပေးသော်လည်း စစ်တပ်က လိုက်နာမှု မရှိပုံတို့ကို ထောက်ပြ ဆွေးနွေး ကြကြောင်း သိရသည်။
“ဒီမိုကရေစီ စနစ်သွားမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတွေမှာလိုပဲ စစ်တပ်ဟာ သမ္မတ လက်အောက်မှာ ရှိနေဖို့နဲ့ အာဏာ အရပ်ရပ်ဟာလည်းပဲ ပြည်သူတရပ်လုံးဆီမှာ ရှိဖို့၊ ပြည်သူ့ထံ အပ်နှင်းထားဖို့ လိုပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ပြင်စရာ စာပိုဒ်အချို့ ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့လည်း ကြိုးပမ်းနေပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာ အေးမောင်က ဆိုသည်။
Posted by PKD at 7:30 AM
Eh Ka Nyaw said...
လုံးဝမရှက်တတ်တဲ့လူတွေထဲမှာ တို့ကရင် KNU လူတချို့ ပါနေတယ်. ငါတို့ကရင်တွေဟာ ဒီလောက်တော် ညံ့နေရလား ဆိုတာ စဉ်းစားရင်း အဆင့်သာရှိပြီး အချင်းမရှိတဲ့ လူတွေကြောင့် ငါတို့ကရင်လူမျိုးတွေအတွက် ရင်လေးမိတယ်..
January 25, 2013 at 12:36 PM
Kanyaw Kaw said...
ဒီလိုလူမျိုး ရဲ့ပါးစပ် က ဒါမျိုးပြောထွက်တာမဆန်းပါဘူး..အရင်က ကွယ်လွန်သူ အန်အယ်လ်ဒီ အတွင်းရေးမှုး ဦးလွင်ကတောင် သတင်းဌာန တစ်ခုနှင့်အင်တာဗျူးမှာ သုံးပွင့်ဆိုင်အစီးအဝေးတွေဘာတွေမလိုပါဘူး..အဓိက က စစ်အစိုးရနှင့်အန်အယ်လ်ဒီ တို့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးရင်ပြီးတာပါဘဲဆိုပြီး
တိုင်းရင်းသားတွေ့ကိုတရားဝင်ကြီးလူသိရှင်ကြားပေါ်တင်ကြီး စာရင်းထဲမသွင်းတဲ့ သူ တို့ မဟာဗမာဝါဒီတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ကိုဖေါ်ပြခဲ့ပြီးပြီဘဲ..
အခု တစ်ယောက်ကလည်း တော်တော်မထိန်းနိုင်ရှာဘူး..လူအများကြီးရှေ့မှာ
တောင် မထိန်းနိုင်မသိန်းနိုင် ကြီးကို စော်ကားတာ.ဒါကချင်တိုင်းရင်းသားတစ်ခုတည်းကို မဟုတ်ဘူးတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကိုစော်ကားတာ.တိုက်ပေါ့ ကွာကချင်ပြုတ်လို့ ကတော့ မင်းတို့ ဗမာတွေလည်း မစားသာဘူးသာမှတ်..လူမျိုးရေးအဓိကရုဏ်းကိုဖန်တီးချင်တဲ့ မင်းတို့ အတွက်ငါတို့ ကလည်းလူမျိုးရေး
အဓိကရုဏ်း က လုပ်ပေးရမှာပေါ့..ကချင်တစ်ရွာကိုမီးရှို့ ရင် မင်းတို့ ဗမာတစ်ရွာလည်း မီးထည်းပါပြီသာမှတ်..ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ကိုတော့မင်းတို့ ဖန်တီးသူတွေကတာဝန်ယူပေါ့..
January 25, 2013 at 3:45 PM
လွှတ်တော်ထဲမှာ စစ်ယူနီဖောင်းနဲ့ ၂၅% သောအမတ်တွေရော ယူနီဖောင်းချွတ်ပြီး တိုက်ပုံနဲ့ ခေါင်းပေါင်းနဲ့ ကြံဖွံ့ ပါတီစစ်သားအဟောင်းအမတ်တွေရော အားလုံးဟာ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင် တဖက်ကလဲ တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ အပြစ်ရပ်ပြီး စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတဆင့်ပြီးတဆင့်သွားပါမယ်ဆိုပြီး ငွေကုန်အချိန် ကုန်ခံပြီး လုပ်နေကြတဲ့အချိန်အခါမျိုးမှာ အခုလိုလွှတ်တော် တွင်းကအမတ်တွေက တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုတခုအပေါ် ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စစ်သားစိတ် စစ်သားပြော စစ်သားအတိုင်းဘဲ ပြည်သူတွေပေါ် ဆက်ဆံသဘောထားနေကြ ယင်တော့ ၂၅% အမတ်စစ်သားတွေဟာ စစ်ကျင့်စစ်ကြံ ပဲကြံကြမှာကြောင့် မဲများတဲ့ဖက်လိုက်ရမဲ့ ကျန် အရပ်သားအမတ်တွေလဲ စစ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနောက်ပဲလိုက်ကြရတော့မှာပေါ့။
စစ်တပ်ထဲကထွက်လာတဲ့သူတွေဟာ သူစစ်တပ်တွင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကတိုင်းရင်းသားနယ်မြေထဲကအ ကြောင်းတွေ အခွင့်သင့်လို့ပြန်ပြောတဲ့စကားတွေနားထောင်ဘူးတာ ခနခနပဲ ဒါပေမဲ့ အင်မတန် မုန်းတီးနေတဲ့ စိတ်နာစေတဲ့ စကားတွေကြီးပဲ ကြားဖူးပါတယ် ကရင်တွေ ရိုးသားကြောင်း ရှမ်းတွေကူညီတတ်ကြောင်း ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပါတ်သက်တာတွေပါကြားရတဲ့စကားတွေကလဲထို နည်း၎င်း ကိုက ကရင်ပါလို့တောင်သူတို့ရှေ့မပြောရဲလောက်အောင် သူတို့စကားလုံးတွေကပြင်းထန်ပါတယ် (ဒါဆို Something Very Big Wrong) တခုခုတော့အကြီးအကျယ်မှားနေပြီထင်ပါတယ်။
ချစ်တယ် ချစ်ပါတယ် ဆိုပြောပြီး ဟန်ဆောင်ပေါင်းတဲ့လင်မယားတချိန်ချိန်ကွဲတာပဲ တကယ်မှစိတ်ထဲကမပါတာ ငြိမ်းချမ်းရေး ငြိမ်းချမ်းရေး ပြော တကယ်စေတနာမမှန်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆို ဘယ်လောက်ကြာကြာခံမှာလဲ။
တိုင်းရင်းသားလက်နှက်ကိုင်အဖွဲ့အစီးတွေမှာလဲ သူပြောသလို ဘိန်းစိုက် ဆက်ကြေးကောက် စီးပွါးရေးသမားတွေဆီက သိန်းထောင်နဲ့ချီယူ ဒါတွေနဲ့လက်နှက်အကောင်းစား မိုင်းနင်းတဲ့ဖိနပ်အကောင်းစားတွေဝယ်တယ်ဆိုတာ ရှိမှာပါ ယုံပါတယ်။ အဲလိုဘာလို့ဖြစ်လဲ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ အစိုးရရဲ့ ဥပဒေမခိုင်မာသေးငြိမ်းချမ်းရေးမရသေးလို့မဟုတ်ဖူးလား အဖြေကိုရှာပြီးအဖြေကိုရှင်းရမဲ့အစားတဖွဲ့အပြစ်တဖွဲ့ထောက်ပြနေတယ်ဆိုယင်တော့ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်အလွန်ဝေးသွားပါပြီ။
တဖက်နဲ့တဖက် အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာ ဥပမာ KNU/KNLA တွေနဲ့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတာ တဦးဦးကလျှော့ပေးလိုက်လို့လား (သို့) ၂ဖက်လုံးကလျှော့ပေးလို့လား(သို့) တဖက်ထဲကလိုချင်တာတွေတခြားတဖက်က အကုန်လိုက်လျှောလိုက်လို့လားဆိုတာ အများကြီးစဉ်းစားရမဲ့ကိစ္စပဲလေ ဘယလို့လဲဆိုတော့ အခုလွှတ်တော်တွင်းက ကြံ့ဖွံ့အမတ်တွေနဲ့ စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့ စိတ်တွေဟာ အလွန်တင်းမာနေတုံးပဲမို့လေ။
လာလည်သူအပေါင်းတို့ ပျော်ရွှင် ချမ်းမြေ့နိုင်ပါစေ
အာဇာနည်များနေ့့ဒို့ မမေ့
Email Address သာထားခဲ့ ဒီမှာ တင်သမျှ Email ထဲကို အကုန်ပို့ပေးမယ်
PARAWON - Education News
The Karen People
Karen Education Department
KIC news English version
Karen Organization of Minnesota
Karen National Union
Drum Publication Group
Karen Youth Organization
Karen Women Organization
Free Burma Ranger
Karen Kwe News
Going Home Where We Belong
Karen Unity Hope Network
Asia Pacific News Network
KNG Kachin news
DVB ဒီမိုကရက်တစ် မြန်မာ့အသံ
RFA လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ
Mizzima Burmese Version
ရသစုံဘလော့၊ သတင်းစာမျက်နှာများ၊ အဖွဲ့ အစည်းများ
DPNS လူ့ ဘော်သစ်
Chin News Group
FTUB federationgunion blog
Myanmar CNN News
Myanmar News Net
WEEKLY ELEVEN ဂျာနယ်
ဘ၃်ခိးနzဒံးဧါ - Bar Koh Nar Dee Ahh....? ( ကရင့်တေ...
၆၄ နှစ်ပြည့်ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ (တပ်မဟာ ၇ - ဓါတ်ပု...
တော်လှန်ရေး ၆၄ နှစ်ပြည့်ချိန် KNU ဘာပြောသလဲ
What is Being Kareness? (feature story)
ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲ အတွင်း အရပ်သားတချို့ ထိခိုက်ေ...
မြန်မာ အစိုးရနှင့် KIO တို့ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်...
(၆၄) နှစ်ပြည့် ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ဂုဏ်ပြုတေး
BGF ပစ်ခတ်၍ KNLA တပ်ကြပ်တစ်ဦးနှင့် အရပ်သားတစ်ဦး ...
FRONT LINE KIA OUTPOST
KNU ဗဟို အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးမန်းငြိမ်းမော...
ဟားတိုက်ရယ်တယ် မထင်လိုက်နဲ့ ငြုပ်သီးစပ်လို့
ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချူပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး၏ (၆၄)ကြိမ်မြောက...
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း (အတွင်းရေးမှူးချုပ်) နှင့် RF...
လွတ်တော်ကိုးစားလှယ် မဟာဗမာဝါဒီတကောင်နှင့် BBC မေြး...
တခါက တပ်မဟာ(၆) ခေါင်းဆောင်ကြီး ယခု KNU ဥက္ကဌသို့ ပေ...
မြန်မာဒုက္ခ သည်များ ခေါ်ယူရေး အမေရိကန် ရပ်ဆိုင်းမည့်...
၆၄ ကြိမ်မြောက်ကရင့်တော်လှန်ရေးနေ့ သို့ ပေးပို့ သော...
DVB TV ၂၀၁၃ ဇန်န၀ါရီ ၂၅ ရက် ညနေ ၄ နာရီ သတင်းစဉ်
RFA Burmese TV January 25, 2013
ကချင်ကို အပြတ်ချေမှုန်းရန် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ အမတ် လွှ...
ပြည်ခိုင်ဖြိုးနဲ့ တပ်ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကချင်အရေး အင်...
မူကွဲလွဲမှု မဖြစ်စေဖို့ UNFC ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ KNU ...
အစိုးရလုပ်ရပ်သည် တိုင်းရင်းသားများ၏ ယုံကြည်မှုကို ပ...
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် (ဇန်န...
What Did KNU Leaders Gain by Going to Naypyidaw?
"ကျတော့်ချစ်တဲ့သူမှာချစ်သူရှိတယ်" - ကောင်းကောင်း
ရှက်တတ်လျှင် လဲသေဘို့ကောင်းသော လွှတ်တော်အမတ်များ နှ...
"Aung San Su Kyi has turnedablind eye" Voices fr...
အစိုးရ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ တဖက်သတ် ဝါဒဖြန့်ခြင်းသာဖြစ်...
၆၄ နှစ်ကြာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဟာ အဖိနှိမ်ခံလူမျိုး အဖိ...
ဒုတိယသက်တမ်းအတွက် သမ္မတအိုဘားမား ကျမ်းသစ္စာကျိမ်ဆိုပ...
ကချင်တိုက်ပွဲကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ ထပ်မံထွက်ပြေး
BGF နှင့် DKBA တပ်အကြား ပြဿနာများ ဦးအောင်မင်း ဖြန...
If Laiza falls, the Union of Burma is finished?
အငြိမ်းစား ကရင်ဆရာ/မကြီးများ အား ဂုဏ်ပြုပွဲနှင့်ေ...
UNFC အနေနှင့်သာ အစိုးရနှင့် ဆွေးနွေးလိုဟု KIO ထုတ်...
ညီနောင်ကချင်အမျိူးသားများအတွက် နှင့် ကေအဲန်ယူအတွက်...
To Help Burma Rise, Karen Woman TakesaStand
UNFC ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် ( 20 Jan 2013)
လဂျားယန်သာမက ကချင်ပြည်နယ်အနှံ့ ထိုးစစ်များ ရပ်ပေးသ...
THE KAREN PURGE AND COUP - ကရင် အာဏာသိမ်းပွဲ
အစိုးရစစ်တပ်၏ ရိက္ခာပစ္စည်းများစွာကို ကေအဲန်ယူ မီးရှု...
KIA ဘက်သို့ ရောက်ရှိနေသည့် အစိုးရ တပ်သားများ ကိုြ...
မန်းငြိမ်းမောင် အင်တာဗျူး - ရန်ကုန် (အသံဖိုင်)
ကချင်အရေး ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ထိခိုက်နိုင်ဟု...
“ကချင်ကို ဒီလောက်တိုက်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ၊ ဘာစိတ်မကျေန...
2752 Karen New Year in Rochester, NY; 2013 (part-1...
.Karen New in Hpa Ah Myanmar (ရုပ်သံ)
(အမေရိကန်) မယ်နီဆိုးတား ကရင်နှစ်သစ်ကူး (ရုပ်သံ)
ဇန္န၀ါရီလ ၂၀၁၃ ကချင်ပြည်နယ်တိုက်ပွဲ (ရုပ်သံ)
ကရင်နှစ်သစ်ကူး ဆုရ ကဗျာသုံးပုဒ်
(ရန်ကုန်) အင်းစိန်တွင်ကျင်းပသော ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲေ...
လိုင်ဇာမြို့ထဲ လက်နက်ကြီး ကျည်ဆံတစ်ချို့ကျရောက် ပေ...
KNU Pado Mahn Nyein Maung speech in Karen New Year...
2752 ခုနှစ်မြောက် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့- ထီးဝါဒိုရွာ...
ရန်ကုန် ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲ KNU တက်ရောက်
နယူးယောက် ယူတီကာ ကရင်နှစ်သစ်ကူး သတင်း
2752 ခုနှစ်ပြည့်ကရင်နှစ်သစ်ကူး - ပုသိမ်မြို့ မော်ဒ...
၂၇၅၂ ခုနှစ်ပြည့် ကရင်နှစ်သစ်ကူး - ပုသိမ်မြို့ မြင်...
သြစတျေးလျနိုင်ငံ မဲလဘုန်းမြို့ ကရင်နှစ်သစ်ကူးကျင်း...
ဆီဖှိ၃်ဃဲးထိးဖှိ၃်အနိး - ကညီကလု၁်
မလေးရှား ကရင်နှစ်သစ်ကူး (ရုပ်သံ)
ပုသိမ်မြို့ တွင်းလည့်လည်သော ကရင်လူငယ်များရဲ့ ကရင်န...
ရန်ကုန်မြို့ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ အာလိန်ငါးဆင့် ဘုရား...
ကျောက်ကြီးမြို့- ကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်
ဒေါက်တာ ဇာနည် အင်တာဗျူး
ဦး ၀င်း တင်ကတော့ခရိုနီ ရော ခရို ပြာရော လက်မခံ...
နဘုလယ်ဒေသခံများကို အိမ်ခြံမြေများ ပြောင်းရွှေ့ပေးရန...
တရုတ်နိုင်ငံတွင်း ကချင်နွယ်များ ကချင်အရေး ဆန္ဒပြ
United Nationalities Federal Council Annual Meetin...
တောင်ကလေးဆရာတော်၏ ၂၇၅၂ နှစ်မြောက် ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ...
အသုံးချခံရသူ နှင့် အသတ်ခံရသူ
Kachin fighting intensifies
ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေး ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့ များနှင့် K...
ဟန်ကိုင်းတောင် အစိုးရ လက်နက်ကြီးကုန်းအား KIA ၀င်စီ...
Oversea Kachin Protest Against War at Home
တရုတ်နှင့် ဂျပန်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ သဲများအကြောင်းသ...
ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး သမ္မတဦးသိန်းစိန်န...
သမိုင်းဆိုတာ မမေ့အပ်ရာ (သို့ ) မမေ့ကောင်းသောဒဏ်ရာေ...
KIA စခန်း နှင့် လိုင်ဇာမြို့ကို ဓါတုလက်နက်ဖြင့် ဗံ...
5/1/2013 နေ့ မှာကျင်းပတဲ့ မောင်ချစ်သူမွေးနေ့ မှာေ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ကိစ္စ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ဟု KNUေ...
ကြိုတင်အသိမပေးဘဲ ၀င်ရောက်လာသော အစိုးရတပ်ကို RCSS တ...
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ပ...